Sony, Samsung & Other Technology: MOBILE GO FOR ANDROID 4.2.0 FULL (NEW ) 11.12.13 Update
MOBILE GO FOR ANDROID 4.2.0 FULL (NEW ) 11.12.13 Update
Wondershare Mobile Go For Android Version 4.2.0 (FULL VERSION)
ဒီ Tools လေးကို လူတိုင်းလဲသိကြမှာပါ။ မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကိုတော့ အောက်မှာ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ သိပြီးသားသူတွေကတော့ Download Link အောက်က Install Guide ကိုဖတ်ပြီးမှသွင်းပေးဖို့ အကြံပြုပါရစေ။
ဒီ Tools လေးကတော့ မိမိရဲ့ Android တွေ အားလုံးရဲ့ PC Suite တစ်ခုလိုမျိုးပါပဲ။
အထဲမှာရှိတဲ့ Data တွေကို Backup ယူလို့ရတယ်၊ ကွန်ပြူတာကနေ APK (Android Application File)
တွေကို ဖုန်းထဲထည့်ပြီး မှတစ်ဆင့် ပြန်ပြီး Install လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ကွန်ပြူတာကနေပဲ One Click လုပ်ရုံပါပဲ။ File Manager တစ်ခုအဖြစ်လဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ကဲကျန်တဲ့ Features တွေကိုတော့ Download ဆွဲပြီးတော့မှပဲ ကလိကြည့်လိုက်တော့နော်။ ကဲ Install ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာကတော့ Download Link အောက်က Install Guide အောက်မှ တစ်ဆင့်ချင်းစီလုပ်လိုက်နော်။
အသေးစိတ်ကိုတော့ သူ့ရဲ့ Official Page > > http://www.wondershare.com/android-manager/ မှာသွားကြည့်လိုက်နော်။
PASSWORD = SSOT
1. အရင်ဆုံး မိမိစက်မှာရှိတဲ့ Anti-Virus တွေကို ခဏပိတ်ပေးထားပါ။ (အထဲမှာပါတဲ့ Patch File ကိုဖမ်းတတ်လို့ပါ၊ Patch File မရှိရင် Trial version ပဲဖြစ်နေမှာပါ)
2. Anti-Virus ပိတ်ပြီးသွားရင်တော့ Download လုပ်လို့ရလာတဲ့ ZIP File လေးကို ဖြည်ချလိုက်ပါ။ Password = SSOT (အထဲမှာ "SSOT_wshare_MBGO_4.2.0.249.exe နဲ့ SSOT_wshare_MBGO_4.2.0.249-patch.exe" ဆိုပြီး ၂ ခု ရှိပါမယ်)
3. ပထမဆုံးအနေနဲ့ "SSOT_wshare_MBGO_4.2.0.249.exe" ဆိုတာလေးကို Run ပြီး Install လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ နောက်ဆုံး Finish ကိုမနှိပ်ပါနဲ့ဦး။
4. လုပ်ပြီးရင်တော့ ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ထဲက "SSOT_wshare_MBGO_4.2.0.249-patch.exe" ဆိုတာလေးကို Copy ကူးပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ခုနက Install လုပ်ထားတဲ့ Folder
(C:\_Program Files\_Wondershare\_MobileGo for Android\_) ထဲကိုသွားပြီး Paste လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Patch ကို Run ပြီး Patch ဆိုတာ ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ Mobile Go လေးပာာ Full Version ဖြစ်သွားပါပြီ။
5. အဆင့် (၃) က Finish ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ Mobile GO လေးပွင့်လာရင် Tiral ဆိုတာလေးကို မမြင်ရတော့ပါဘူး။ အဆင့်(၃) မှာ Finish နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Trial Version ဆိုပြီး ၀ယ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ :P :P :P
Posted by Kaung MYat at 7:51 AM
Labels: Use on PC